भर्ना नपाएर छटपटाउँदै सिकिस्त बिरामी « Drishti News – Nepalese News Portal
भर्ना नपाएर छटपटाउँदै सिकिस्त बिरामी
२१ बैशाख २०७८, मंगलबार 6:41 am
नेपालगन्ज । कोरोनाको ‘हट स्पट’ नेपालगन्जमा लामो समयसम्म शव व्यवस्थापन नहुँदा अन्य बिरामी र कुरुवाले मानसिक तनाव झेल्नुपर्ने मात्र होइन, बेडका लागि पालो कुरिरहेका अन्य बिरामी पनि समयमा उपचार पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् । आइतबार मृत्यु भएका सल्यानका पुरुषको शव समयमा नउठाउँदा दिनभर बेड खाली नभएको कुरुवा पौडेलले बताए । ‘दिनभर शव नउठाउँदा अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामी पनि बाहिर बसेर पालो कुरिरहेका थिए । शव उठ्नासाथ बिरामीले ठाउँ पाए । नयाँ बिरामी थपिए,’ उनले भने ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर थापाले भने मृत्यु भएको प्रमाणित गर्न र शव व्यवस्थापनका लागि सेना र परिवारका सदस्यलाई बुझाउन समय लाग्ने गरेको बताए । कहिलेकाहीँ परिवारका सदस्य समयमा नआउँदा पनि व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘जतिसक्दो छिटो शव व्यवस्थापन गर्न अस्पताल तत्पर हुन्छ, तर कोरोनाका बिरामीका आफन्त समयमा नआउने र सेनाको शव व्यवस्थापन टोलीले नभ्याउने गरेका कारण केही ढिला हुने गरेको छ,’ डा. थापाले भने ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।